के हामीले संगठनकाे सिद्दान्तलार्इ अपनाएका छाैँ त?
चैत ०४, २०७४ BNNTV
अाज हामी एउटा सानो बिरूवामा अंकुरण भईरहेछौं तर त्यसमा मलजल र किटाणुनासक अौषधि अलि पुगिरहेको छैन, यसको मतलव हो सहकार्य, समझदारी, टिमवर्क, र नेपाल विधार्थी संघका मेरा समकक्षी साथीहरूकाे भावी योजना ! सबैभन्दा पहिले हामीले के बुझ्नु पर्छ भने अहिले हामी कुन नेताकाे अधीन र टिम भित्र छौं ? हामीले यी कुनै टिम नेतासँग सहकार्य नगरी त्यो अहिलेकाे अवस्थामा याे माहोलको कार्यनितिमा चलखेल गर्न गार्हो पर्छ याे स्वभावतः ठिक पनि हाे ।
पार्टी संगठन भित्र यस्तो कुरालाई हामीले सामान्य रुपमा लिनुपर्छ । अहिले नेपाल विधार्थी संघमा समावेशी समानुपातिक अारक्षण जस्तो विषय ठिक हो होइन यसकाे निष्कर्ष निकाल्न अरुबाट होइन अब हामीले सुरुवात गर्नु पर्छ। अर्को कुरा अहिले जुन संगठनमा भएको दम्भ घमण्ड र एकाधिकार छ त्यस सन्दर्भमा म एउटा उदाहरण दिन चाहान्छु; दक्षिण अफ्रिकाको सन्दर्भलाई नेपालको तुलनामा राख्न सक्नु पर्छ ! जब कि नेलशन मण्डेलालाई २७ वर्षसम्म गोराहरूको सरकारले जेलमा थुनि राखेका थिए तर रङ्गभेद र वर्णभेदको लडाईं चलि नै रहेको थियो । अन्तमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संघ संस्थाले र स्वदेशका जुझारू काला समुदायले नेलशन मण्डेलालाई जेलबाट मुक्त गराएपछि नेलशन मण्डेलाको पार्टी गोराहरूको सरकार र संविधानमै रहेर पार्टी दर्ता गराए । त्यै गोराहरूको सरकारले निर्धारित गरेको चुनावी प्रक्रिया अनुसार चुनावी अभियानमा भाग लिएका नेलशन मण्डेलाका ७८% प्रतिशत काला वर्णको भोट प्राप्त गरेर शताब्दीअाैँ देखि चलिअाएकाे शाशनलार्इ समाप्त गरि अाफ्नो मुक्ति र अस्तित्व खडा गरेको थिए । अाज उनीहरू शासक र शासित छन् ! तर गोराहरूलाई न्युनतम सरकारी पदमा राखेकै छन्, यस्तै गरि हामी पनि संगठनकाे अान्तरिक लडाइँ लडदै अगाडि बढ्नु पर्छ तर कुनै टिमका नाममा होइन । समकक्षी साथीहरू पुर्ण रुपमा संगठित हुन अावश्यक छ।
नेपाल बिधार्थि संघकाे सुन्दर इतिहासलार्इ अात्मसात गर्दै लक्ष्य प्राप्तिका लागी मुलभुत मान्यतामा पनि सहजता र स्वभाविक रुपले उभिनु पर्ने देखिन्छ । नेपाल बिधार्थि संघका हरेक याेद्धाका लागि अाफु भन्दा झण्डा ठुलो ,झण्डा भन्दा सिद्धान्त ठुलो सिद्धान्त भन्दा देश ठुलो हाे भन्ने कुरा अातमसात गर्न जरूरी छ । अर्थात जनता हुन राष्ट्र नभए कुनै कुराकाे अाश गर्न सकिदैन । यहाँ गलत रूपमा चल्दै अाएकाे व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ । अहिलेकाे समयलार्इ नियालेर हेर्दा मुलुकमा राजनीतिका साथै षड्यन्त्र भइरहेकाे छ, बिकास छैन, राेजगारि भन्दा बेरोजगारी बढी र ईमान्दारि भन्दा बढी भष्टाचारी बढी छ।
विगतमा संस्थागत मुल्य मान्यता प्रति अास्थावान रहने हाम्राे विचारपनि समयसंगै बदलिइरहेकाे छ । बिधार्थि शक्ति केबल चुनावी साधन मात्रकाे रूपमा हेरीन थालिएकाे छ । संगठनकाे मान्यतालार्इ अात्मसात गरी समाजका विसंगति हटाएर क्षमतामुलक समाजकाे परिकल्पना नै राजनीतिक यथार्थता बनाउन जरूरी छ । मान्यताहरूलार्इ पुर्ण र सफल पार्न विगतका तिता अनुभवलाई विर्सेर अर्थात विषाक्त मानसिकता बाट टाढा रहेर कर्तव्य तर्फ निष्ठावान रहि कार्यान्वयन तर्फ बढी उनमुख गर्नु गराउनु ने वि संघका युवाहरूको सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी हुनेछ । स्मरण रहाेस हामी फुट्याै एमालेले याे देशका सबै निकायलाई एमाले भर्ती केन्द्र बनायो हामी जुट्याै कम्युनिस्टहरूकाे साम्यवादी षड्यन्त्र चकनाचुर भयाे। अहिले देशभरका कम्युनिस्ट एक भएर पनि उनिहरुकाे चर्तिकला देखेर कम्युनिस्टहरूलाई रत्नपार्ककाे सडकले पनि घृणा गरिरहेकाे छ। अब स्थायित्वकाे युगकाे चाहाना गर्ने नेपाल बिधार्थि संघका तरुणहरुले हरेक कुराकाे हरेक समस्यालाई सावधानी पुर्बक हेर्नुपर्ने समय अाएकाे छ ।
नेबिसंघ एउटा यस्ताे विद्यार्थी संगठन हाे जसले अहिलेकाे राजनितिलार्इ पुर्णरूप दिइरहेकाे छ । दुनियाँकाे कुनै संगठन छैन हाेला स्थापनाका ५० बर्ष भित्र प्र ,म,सभामुख ,लगायत थुप्रै सासंद जनप्रतिनिधि र राष्ट्रिय स्तरको नेतृत्व उपार्जन गर्न सक्ने ।नेपाल बिधार्थि संघका भु.पु नेताहरूले हिजाे अाज शासनकाे बागडोर सम्हालेका छन र सम्हालेका थिए। याे नेपाल बिधार्थी संघका तरुणहरुकाे लागि सबैभन्दा खुशीकाे कुरा हाे। नेपाल बिधार्थी संघ नेपाली कांग्रेसको भातृसंस्था मात्र हाेईन नेपाली कांग्रेसको फ्याक्ट्रि पनि हाे जहाँबाट थुप्रै राजनेता र याेद्धा पनि जन्मन सक्दा रहेछन, जुनकुरा अाज सावित भएकाे छ। यसलाई बढी भन्दा बढी परिमार्जन र गतिशील बनाउन र बन्ने प्रयास सबैबाट हुनुपर्दछ।
नेपाल बिद्यार्थी संघकै अथक परिश्रम र प्रतिवद्धताकाे शङ्खघाेषले अाज सडकमा महाविधालयहरुमा कलम मशाल अंकित झण्डा फहराउन सफल भएको छ। बिगतबाट सबैले सवक लिनुपदर्छ नेपाल बिधार्थि संघका हरेक याेद्धाहरुकाे अनुहारमा प्राप्त स्मरणीय सहिद राम लक्ष्मण जस्तै भातृ प्रेम र विरताले भरियकाे हुनुपर्दछ । मलाई बि,पि काेईरालाकाे एउटा वाक्य सधै स्मरण हुन्छ , “मानिस ठूलो होइन असल हुनुपर्दछ”। ठूलोले त अहंकार जन्माउछ र अन्तमा गएर ध्वस्त हुन्छ तर असलले महानता जन्माउछ । अन्त्यमा जसले निर्माण गर्दछ जुन कुरालाई अंगिकार गरि बर्तमान परिस्थिति संग कडा मुकाविला गर्ने अठाेट नेपाल बिधार्थि संघले लिनुपर्छ । यसैमा मुलुककाे र हरेक प्रजातन्त्रवादीकाे हित छ ।
अन्त्यमा निरङ्कुशता,अस्थिरता,राणा शासन,पञ्चायत,राजकाे निरङ्कुश शासन,सामाजिक पछौटेपन,अशिक्षा,गरिबी र छुवाछूतकाे बाक्लो बादलमुनि छाेपिएकाे मेरो देशलाई उज्यालोमा लैजाने काम नेपाली काँग्रेसकाे नेतृत्वमा छ । काँग्रेस बिचार,अान्दोलन र रुपान्तरणकाे प्रतिक हाे,र अहिलेसम्म यी सबै कुराकाे नेतृत्व काँग्रेसले गर्दै अाईरहेकाे छ। बिचार,पद्धति,संगठन निर्माण,सुचनाकाे चेतना र नागरिक संलग्नता सँग विश्वलाई जाेडने काम पनि काँग्रेसले नै गरेकाे हाे। यि सबै कुरा बुझेर निचोड निकालेर हामी काँग्रेसकाे अनुयायि भएका हौं भन्ने भावनाकाे विकास गरौँ । जय नेपाल ।।
‘लेखक नेविसंघका नेता हुन ।’
प्रकाशित : आइतबार, चैत ०४, २०७४१३:०१
राष्ट्रियसभा सदस्य यादवले लिए शपथ